Mashandiro anoita Pegasus uye kuti ungaziva sei kana uine hutachiona | Nhau dze iPhone
louis padilla | 03/05/2022 12:57 | Noticias, dzakawanda
Pegasus ndiro izwi guru. The Hack mudziyo we kuwana data rese pane chero iPhone kana Android smartphone inhau munhau dzese. Chinoshanda sei? Ndingaziva sei kuti ndine utachiona? Tinokuudza zvose pasi apa.
1 Chii chinonzi Pegasus?
2 Ndinoisa sei Pegasus pafoni yangu?
3 Ndiani anogona kushandisa Pegasus?
4 Ndingaziva sei kuti ndine utachiona?
5 Ndingadzivirira sei kutapukirwa nePegasus?
Chii chinonzi Pegasus?
Pegasus chishandiso chekusora pane yako smartphone. Tinogona kuzvironga se "hutachiona" kuti tese tinzwisise mumwe nemumwe, izvo zvisingakuvadze foni yako, hazvikonzerese kuti chero chinhu chibviswe kana kusashanda, asi inokwanisa kuwana data rako rese uye inotumira kune chero akaisa hutachiona uhu pafoni yako. Ichi chishandiso chakagadzirwa neNSO Group, kambani yeIsrael inotengesa chishandiso ichi kusora vanhu. Ehe, zviri nyore kudaro, ikambani inozivikanwa kwazvo, iyo munhu wese anoziva zvainoita uye inotenderwa zvisinei nemhere-mhere yakasimudzwa yakatenderedza kubva pakuvapo kwayo kwaizivikanwa. Apple yakatomhan'ara kambani iyi.
Ndinoisa sei Pegasus pafoni yangu?
Vanhu vanogara vachitaura nezve iPhones inotapukirwa nePegasus, asi chokwadi ndechekuti chishandiso ichi inoshanda kune ese ari maviri iPhone uye Android. Zvinangwa zvechishandiso ichi zvinowanzova vezvematongerwo enyika vepamusoro, vatori venhau, vatsigiri, vanopikisa ... vanhu "vanofarira" mukusora kudzora mafambiro avo uye kuziva zvese zvavanoziva, uye vanhu ava, nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza, vanowanzo shandisa iPhones, yakachengeteka kupfuura Android, asi yakachengeteka sezvairi, haina kukuvara.
Kuti Pegasus iiswe pa iPhone yako hautombodi kuita chero chinhu. Kambani yeNSO yakagadzira chishandiso chemberi zvekuti chinogona kupinda munharembozha yako pasina iwe kubaya pane chero chinongedzo kana kudhawunirodha chero maapplication. Yakareruka WhatsApp kufona kana meseji inotumirwa pafoni yako, pasina iwe kuivhura, inogona kupa mukana kune iyi spyware. Kuti uite izvi, tora mukana wezvinonzi "zero day vulnerabilities", zvikanganiso zvekuchengetedza izvo mugadziri wefoni haazive uye saka haagone kugadzirisa, nekuti haatomboziva kuti aripo. Kana yangoiswa, zvese, ndinodzokorora, zvese zviri pa iPhone yako zviri mumaoko eani nani anoshandisa chishandiso ichocho.
Apple yakatoburitsa yakagadziridzwa mwedzi yapfuura iyo yakagadzirisa akati wandei ezvo zvikanganiso zvekuchengetedza, asi Pegasus anowana vamwe uye anotora mukana iwo. Nhasi hatizive kuti anoshandisa zvipembenene zvipi, kana kuti nhare dzipi kana OS shanduro dziri panjodzi kune yayo spy tool. Isu tinoziva kuti Apple inovagadzirisa painongozviwana, asi isu tinoziva zvakare kuti pachagara paine tsikidzi dzinowanikwa uye dzichishandiswa. Ndiwo mutambo usingaperi wekatsi nembeva.
Ndiani anogona kushandisa Pegasus?
Boka reNSO rinoti chishandiso chayo chinongoshandiswa nemasangano ehurumende, sekunge izvi zvinonyaradza. Asi sekutaura kwakaita Tim Cook paaikurukura nezvekumanikidza makambani kugadzira "gonhi rekumashure" rinopa mukana kune mafoni pazvinenge zvichidikanwa, "gonhi rekuseri revarume vakanaka isuwo rekuseri kune vakaipa." Iyo chete nyaradzo yatinayo isu vagari vemo ndeyekuti Pegasus haiwanikwe kune chero munhu nekuda kwezvikonzero zvehupfumi chete. Kushandisa chishandiso ichi kumunhu mumwe kune mutengo we96.000 euros, saka handifunge kuti waunoshanda naye kana kuti muramu wako achaishandisa pakusora foni yako.
Asi zvinonetsa kuti munhu wese azive kuti zviripo chishandiso chinogona kutisora ​​maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva 24 yegore tichishandisa smartphone yedu, tichiziva zvese zvatinoita, kuona, kuverenga, kuteerera uye kunyora. Ndiani anogona kuvimbisa kuti Pegasus haigoni kuwira mumaoko evamwe vanoitengesa zvakachipa? Kana kutoita kuti iwanikwe kune wese mahara? Uye izvo zvandakakuudza pamusoro pekutanga kwechinyorwa, chinonyanya kunetsa kuziva kuti kambani yakaitwa naPegasus inogona kuita nekusabatwa nechombo chinotyora mitemo yese inobvira.
Ndingaziva sei kuti ndine utachiona?
Kana iwe uchida kuziva kana mumwe munhu akaisa Pegasus pafoni yako, pane zvishandiso zvekuzviona uye ndezvemahara. Kune rimwe divi isu tine yakavhurika sosi software yakagadziriswa neAmnesty International uye kuti iwe unogona kudhawunirodha kubva kuGitHub (link) Nekudaro, haisi software iyo munhu wese anogona kushandisa nekuda kwekuoma kwayo, saka kune dzimwe nzira dziri nyore uye dzinowanikwa kune avo vasina hunyanzvi hwemakombuta. Semuenzaniso iMazing tool (link), yemahara kudhawunirodha, zvakare inobvumidza iwe kuti uzive kana wakabatwa nePegasus. Inoenderana neWindows uye macOS uye kunyangwe mamwe maficha ayo akabhadharwa, Pegasus yekuona ndeyemahara.
Ndingadzivirira sei kutapukirwa nePegasus?
Sezvazviri, kana mumwe munhu achida kuisa Pegasus pafoni yako, hapana nzira yekuitenderedza zvachose. Asi iwe unogona kutora matanho ekudzikisa njodzi kusvika padiki inogoneka. Isu tinoziva kuti kwave netsikidzi dzakabvumira Pegasus kuisa pasina mushandisi kuita chero chinhu, asi isu tinoziva zvakare kuti Apple iri kuramba ichiburitsa zvigamba kugadzirisa iwo mabhugi, saka. Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unogara uchichengeta yako iPhone yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni iripo. Izvo zvakakoshawo kuti usadzvanya pane zvinongedzo izvo zvausingazive kwauri, kana kuvhura mameseji kubva kune vasingazivikanwe kana vanoshuvira vanotumira.
Panyaya yekuiswa kwemaapplications, paIOS haugone kuisa mapurogiramu kubva kunze kweApp Store. Ichi chinhu chiri kukurukurwa iye zvino nemasangano akawanda akadai seEuropean Commission, asi inzira yekuchengetedza inotidzivirira kubva kukurwisa kwekunze. Kana chero nguva Apple ikamanikidzwa kuvhura system yayo uye kubvumira "sideloading" kana kuisirwa maapps kubva kunze kwechitoro chayo, njodzi dzinowedzera zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Mashandiro anoita Pegasus uye kuti ungaziva sei kana uine hutachiona
Podcast 13x30: Pegasus, humwe hutachiona hunotyisidzira denda